Posted by ကို FACETIME2019 — ဒီဇင်ဘာလ 22, 2019 တွင် FaceTime Download
မကျြနှာကိုအချိန်က Apple Inc မှအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးအံ့သြဖွယ် App ဖြစ်ပါတယ်. ဤဗီဒီယိုအားတယ်လီဖုန်းထုတ်ကုန်မှာရယ်စရာကောင်းလောက်အောင်ကိုဗီဒီယိုသို့မဟုတ်အသံဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအားဖြင့်အခြားသူများနှင့်ချိတ်ဆက်ရလွယ်ကူစေတော်မူပြီ. ဤသည်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်မျက်နှာအချိန် app ကို Mac OS X မှာအတူပါ Macintosh ကွန်ပျူတာများပေါ်တွင်လည်းအားလုံး IOS ကိုထောက်ပံ့ပစ္စည်းများနှင့်အတူထည့်သွင်းတာဖြစ်ပါတယ် 10.6.6 နောက်ပိုင်းတွင်.
mac အခမဲ့ download ပြုလုပ် FaceTime
mac များအတွက် FaceTime app ကို
mac များအတွက်အခမဲ့ FaceTime
mac အခမဲ့ download, FaceTime
Mac OS X များအတွက် FaceTime
mac များအတွက် FaceTime အခမဲ့ download
mac များအတွက်အခမဲ့ FaceTime ကို download
ဒီ app ကိုစပိုင်းတွင် iPhone အတွက်တီထွင်ခဲ့သည်4၎င်း၏လျင်မြန်လူကြိုက်များမှုကြောင့်ယခုအသုံးပြုသူများအဒါပေမယ့်, ကအိုင်ဖုန်းအပါအဝင်အားလုံး Apple ထုတ်ကုန်အတွက် built-in feature ကိုဖြစ်လာ, အိုင်ပက်, မက်, နှင့် iPod touch နဲ့. ဆက်သွယ်ရေးဒီနေ့ရဲ့အသက်တာ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးယခုသင်အဆင်ပြေသင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝတွေကိုနှင့်အတူထိတွေ့ဆက်လက်တည်ရှိရန်သင့် mac အပေါ်မျက်နှာအချိန်ကိုသုံးနိုင်သည်.
သင့် Mac အတွက်, သင်ရုံသင့်ရဲ့အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်သို့မဟုတ်ဆယ်လူလာဒေတာကိုလိုအပ်ပါတယ်, ပြီးတော့သင်အလွယ်တကူကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံနှင့်သင်၏အဆက်အသွယ်စကားပြောနိုင်သည်. မျက်နှာအချိန်ဒီယှဉ်ပြိုင်မှု app ကိုသင်တစ်ဦးခရီးစဉ်အပေါ်နေစဉ်မိသားစုသို့မဟုတ်မိတ်ဆွေများကိုပြောပြရန်ဖြစ်နိုင်ဖန်ဆင်းတော်မူပြီ, သင့်ရဲ့န်ထမ်းတွေနဲ့ထိတွေ့နေဖို့နိုင်ပါတယ်, တင်ပြချက်များကိုပေးနိုင်ပါသည်, သင့် client စကားပြောနှင့်စာရင်းအပေါ်သွားသည်.
ဒါဟာအဆုံးစွန်ဖြစ်ပါတယ်, ဖန်တီးမှု, ရှင်းလင်းသော, Apple ထုတ်ကုန်၏ကမ္ဘာပေါ်မှာအဆက်အသွယ်တွေနဲ့ဆက်နွယ်နေသောဗီဒီယိုသို့မဟုတ်အသံဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပြုပါနှင့်ဆက်လက်အလိုလိုသိနှင့်အဆင်ပြေလမ်း. ဤဆောင်းပါးသည်အခြေခံဒေါင်းလုတ်ဆွဲ features တွေနားလည်ရန်သင့်အား enable ပါလိမ့်မယ်, အသုံးပြုမှုနှင့်သင့် Mac အတွက်မျက်နှာအချိန်ကာလသည်အခြားအစိတ်အပိုင်းများ.
1 မျက်နှာအချိန်, Mac OS အတွက် Download:
2 Mac အတွက် Apple ကစတိုးဆိုင်အားဖြင့်မျက်နှာအချိန် Install လုပ်ဖို့ခြေလှမ်း:
2.1 Mac ပေါ်တွင်မျက်နှာအချိန်များအတွက်အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းများ:
3 Mac ပေါ်တွင် FaceTime ကို set up လုပ်နည်း:
3.1 မကျြနှာကိုအချိန်သတိပေးချက် & Mac ကတွင်အင်္ဂါရပ်များ:
3.2 မျက်နှာအချိန်အတွက် notification setting များကို:
မျက်နှာအချိန်, Mac OS အတွက် Download:
သင့် Mac ပေါ်မှာမျက်နှာအချိန်ကို အသုံးပြု. များအတွက်, ဒါကြောင့်ကိုယ့်အနည်းငယ်ကလစ်တစ်ကိစ္စင်. မကျြနှာကိုအချိန်သင့်ရဲ့ mac တစ်ခုဖယ်ရှားရာမှာ App ဖြစ်ပါတယ်. ပြီးသားပါပြီ pre-installed, Mac အားလုံးနောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းမျက်နှာအချိန်.
သင်ပြုရန်ရှိသည်အားလုံးရိုးရိုးသင့်ရဲ့ iPhone နံပါတ်နှင့် Apple ကအီးမေးလ်တစ်စောင် ID ကိုပေါင်းထည့်နေသည်နှင့်သင့် mac ပေါ်တွင်အမြင့်ဆုံးသောအရည်အသွေးဗွီဒီယိုကိုတယ်လီဖုန်း devices များထဲကတစ်ခုခံစားနိုငျ. သင်အလွယ်တကူနဲ့ Mac အပါအဝင် Apple ထုတ်ကုန်သုံးပြီးအခြားအသုံးပြုသူများ၏အဆက်အသွယ် add နိုင်ပါတယ်, အိုင်ဖုန်း, iPad, iPod ကို, စသည်တို့ကို. သငျသညျက Apple ၏ကမ္ဘာပေါ်မှာအခြားအသုံးပြုသူများကိုဆက်သွယ်ရန်သင့် Caller ID ကိုအဖြစ်သင့် Apple ID ကိုအီးမေးလ်ကိုသုံးနိုင်သည်.
ကိစ္စတွင်သင်သည်သင်၏ mac အတွက် In-တည်ဆောက်မျက်နှာအချိန် app မရှိပါ, သငျသညျရိုးရှင်းစွာနဲ့ Mac App Store ကိုလာရောက်လည်ပတ်နေဖြင့် Download ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်. Mac က App Store ကို အသုံးပြု. များအတွက်, သငျသညျကိုအနည်းဆုံးနဲ့ Mac OS X ကိုရှိရမည် 10.6 သို့မဟုတ်ပိုမိုမြင့်မား. သင်သည်သင်၏ desktop ပေါ်မှာအတွက် Mac ကို App Store မှာရနိုငျဖြစ်စေသို့မဟုတ်သင် Pre-ထည့်သွင်း App Store မှာကရှာတှေ့နိုငျ.
Mac အတွက် Apple ကစတိုးဆိုင်အားဖြင့်မျက်နှာအချိန် Install လုပ်ဖို့ခြေလှမ်း:
ရှာတွေ့သည် မကျြနှာကိုအချိန် APp အဆိုပါ In-တည်ဆောက် Mac အတွက် Apple ကစတိုးဆိုင်၏ Search bar မှာမျက်နှာအချိန်ရေးသားခြင်းဖြင့်သို့မဟုတ်တိုက်ရိုက် click နှိပ် ဒီမှာ.
သင်သည်သင်၏ Mac အတွက်မျက်နှာအချိန် app ကိုဝယ်ယူနိုင်မဒါယ်ယူရန်ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ.
သင့်ရဲ့ Apple ID ကဒီဆော့ဖ်ဝဲကိုဝယ်ယူဘို့ Enter
မျက်နှာအချိန် app ကို install လုပ်၏ကုန်ကျစရိတ်ရုံအဘို့ဖြစ်၏ $0.99
နားလည်ရန်အရေးကြီးပါသည်ဒါဟာဖြစ်ပါသည်, သငျသညျ, Mac App Store မှ install လုပ်ပါလိမ့်မယ်ယင်း Face အချိန်ဗားရှင်းအဟောင်းကိုကြောင်း. မျက်နှာအချိန်များ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းနဲ့ Mac OS X မှာရရှိနိုင် 10.6 သို့မဟုတ်ပိုမိုမြင့်မား. ဒါဟာသင်နဲ့ Mac ဗားရှင်းအဟောင်းကိုအသုံးပြုနေသည်သာလျှင်မျက်နှာအချိန်ကို download လုပ်ပါရန်အကြံပြုသည်.
သင်ထည့်သွင်းထားသောပြီးတာနဲ့သို့မဟုတ်မျက်နှာအချိန်ဆော့ဖ်ဝဲကိုရယူသင့် Mac အတွက်, သငျသညျက Apple devices များသုံးပြီးအပေါငျးတို့သညျအခွားလူတို့အားန့်အသတ်ဗီဒီယိုများသို့မဟုတ်အသံဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနိုင်ပါတယ်.
သငျသညျ, Mac OS နဲ့ Mac အတွက်ရှိရမည်ဒါမှမဟုတ်သင်နဲ့ Mac OS X ကိုတိုဖြစ်စေ 10.6 သို့မဟုတ်ပိုမိုမြင့်မား.
သငျသညျကိုဗီဒီယိုသို့မဟုတ်အသံခေါ်ဆိုမှုများအတွက်အသုံးပြုချင်သမျှသောအဆက်အသွယ် Apple ကကျနော်ဖုန်းများအတွက်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ Mac ကို အသုံးပြု. ရမည်ဖြစ်သည်ရှိရမည်.
စိတ်ဝင်စားစရာ, သင်သည်လည်း Apple ကိုစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကို အသုံးပြု. အသုံးပြုသူများနှင့်သင့် Mac အတွက်မျက်နှာအချိန်အသံဖိုင်ကိုခံစားနိုင်ပါတယ်.
သငျသညျအပြည့်အဝရညျအသှေးကိုခံစားနိုင်အောင်သင့်လျော်ခြင်းနှင့်အစာရှောင်အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ရှိသည်ဖို့သေချာပါစေ ဗီဒီယိုကိုသို့မဟုတ်အသံဖုန်းခေါ်ဆိုမှု ကြားဖြတ်မပါဘဲ.
သငျသညျဒီ app ကိုစတင်သုံးစွဲဖို့သင့် Apple ID လုပ်ရမည်ဖြစ်သည်.
Mac ပေါ်တွင် FaceTime ကို set up လုပ်နည်း:
ပထမဦးစွာ, သင့် Mac ပေါ်တွင်သင်၏မျက်နှာအချိန် software ကိုဖွင့်လိုက်ပါ. သငျသညျ, Mac ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ထံမှမျက်နှာအချိန်ကို install အားဖြင့် Pre-installed software ကို အသုံးပြု. ဖြစ်စေဖွငျ့ဤလုပျနိုငျ Mac က App Store ကို
သင့်လက်ရှိ Enter Apple က ID ကို သင့် ID ကိုမရှိဘူးလျှင်, သင်လုပ်နိုင်သည် ဖန်တီး တစ်.
အဆိုပါဖြည့်စွက် စိစစ်အတည်ပြု ဖြစ်စဉ်
သင်သည်သင်၏အပေါ်ဖြစ်စေရတဲ့ link ကိုအားဖြင့်သင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုအတည်ပြုရန်နိုင်ပါတယ် အီးမေးလိပ်စာ သို့မဟုတ်သင်တစ်ဦးစိစစ်အတည်ပြုရနိုင် ကုဒ် သင့်ရဲ့အပေါ် ဖုန်းနံပါတ်.
အတည်ပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးနောက်, သင် ... ရမည် ဖုန်းနံပါတ် add နှင့် အီးမေးလ်ကအိုင်ဒီ သင်ပထမဦးဆုံးမျက်နှာအချိန်ခေါ်ဆိုခအောင် start အခြားအဆက်အသွယ်.
အဆိုပါ software ကိုအသံသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်ရန်သင့်ရဲ့ preference ကိုမေးပါလိမ့်မယ်. သင်အခြားအသုံးပြုသူများနှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့လိုခငျြသမြှကိုရွေးနိုင်သည်.
e-mail လိပ်စာအပါအဝင်အခြားအသုံးပြုသူများ၏သတင်းအချက်အလက်များကိုထားပါ, အမည်သို့မဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်. သင်က search bar ပေါ်တွင်ဤအချက်အလက်ရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့်လုပျနိုငျ.
နောက်ဆုံး, မျက်နှာအချိန်များ၏မတူနိုင်တဲ့ app ကိုအတူအရည်အသွေးမြင့်ဖုန်းခေါ်ရန်တယ်လီဖုန်းသို့မဟုတ်ကင်မရာကိုထိပုတ်ပါ.
မကျြနှာကိုအချိန်သတိပေးချက် & Mac ကတွင်အင်္ဂါရပ်များ:
သင်သည်အခြား Apple ကအသုံးပြုသူများသို့မဟုတ်သင်ဖုန်းခေါ်ရတဲ့နှင့်သင့်ကျွန်မဖုန်းသို့မဟုတ်ငါ Pad ထွက်ရှာတွေ့ကြသည်မဟုတ်လျှင်ချိတ်ဆက်ဖို့လိုပါလျှင်, ထို့နောက်သင်သည်အလျင်အမြန်ခေါ်ဆိုမှုတက်ရောက်ရန်သင့် Mac ကိုသုံးနိုင်သည်.
ထို့အပြင်, သင်သည်သင်၏ခေါ်ဆိုခအလယ်၌ဖြစ်ကြပြီးမည်သည့် setting ကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ထို့နောက်သင်သည်သင်၏မောက်စ်ရွှေ့နှင့်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုခုကိုကလစ်နှိပ်ပါ
သငျသညျမိုက်ကရိုဖုန်းအသံပိတ်သို့မဟုတ် unmute နိုင်ပါတယ်
သင်တို့အပေါ်မှာနှင့်သင့်ဦးစားပေးအပေါ် မူတည်. ချွတ်ဗီဒီယိုကိုဖွင့်နိုင်ပါတယ်
အရေးကြုံလျှင်, သင်သည်သင်၏ Mac ပေါ်တွင်မျက်နှာအချိန်မဆို setting ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်လိုခငျြ, သငျသညျအဆင်ပြေပြီးတော့အကြောင်းကြားစာများကိုသွားပြီးရင် system ကိုဦးစားပေးသွားပါ Apple ကမီနူးသွားသဖြင့်ဒီဘူးနိုင်ပါတယ်. တစ်ဦးက window ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောနဲ့တူဖွင့်ထားရလိမ့်မယ်:
မျက်နှာအချိန်အတွက် notification setting များကို:
သင်အလွယ်တကူသင်ကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်းမဆိုအင်္ဂါရပ်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ပိတ်နိုင်သည်. သငျသညျအကြောင်းကြားစာများ၏အသံပြောင်းလဲနိုင်သည်, app ကို icon များ, အကြောင်းကြားစာနှင့်မွမ်းမံမှုများနှင့်အများကြီးပို
နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖွယ် feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်, သငျသညျအုပျစုအုပ်စုတစုမျက်နှာအချိန်အသံဖိုင်သို့မဟုတ်ဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမှတဆင့်ခေါ်ဆိုစေနိုင်သည်. အထိ 32 အဆက်အသွယ်အုပ်စုတစ်စုခေါ်ဆိုမှုများအတွက်အသုံးပြုရနိုင်. ဒါကန်ထမ်းများအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည်, အဖှဲ့အစညျး, နှင့်အမှတ်တံဆိပ်. ဒါကကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံနှင့်အတူလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှန်ထမ်းများနှင့် clients များချိတ်ဆက်ရန်သူတို့ကိုအထောက်အကူ.
ဒီမှာဆောင်းပါးကို set up နဲ့ mac အပေါ်မျက်နှာအချိန်သုံးစွဲဖို့အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များရှိပါတယ်. ငါဆောင်းပါးသင်တို့အဘို့သိကောင်းစရာများခဲ့မယ်လို့မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်သင်ဤအပိုင်းအစထံမှအသုံးဝင်သောဒေတာတယ်. သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းများရှိပါက, do share it in the comment box below and share with your friends and family.
သင် ... နိုင်ပါသည် ဒါ့အပြင်လိုပဲ